August 2018 – Dhammadīpa
Ardor and Fear of Wrong-doing
Posted on 11 Aug 2018 by Ashin Sopāka
“Bhikkhus,abhikkhu who is without ardour and without fear of wrongdoing is incapable of attaining enlightenment, incapable of attaining Nibbāna, incapable of attaining the supreme security from bondage. Butabhikkhu who has ardour and fear of wrongdoing is capable of doing so.” – Iti 34
“Anātāpī, bhikkhave, bhikkhu anottāpī abhabbo sambodhāya, abhabbo nibbānāya, abhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamāya. Ātāpī ca kho, bhikkhave, bhikkhu ottāpī bhabbo sambodhāya, bhabbo nibbānāya, bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamāyā”ti.
ရဟန်းတို့ ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လမရှိသူ မကောင်းမှုမှ မထိတ်လန့်တတ်သူရဟန်းသည် သစ္စာလေးပါးတရားကို သိခြင်းငှါ မထိုက်တန်၊ နိဗ္ဗာန်ရခြင်းငှါ မထိုက်တန်၊ အတုမရှိမြတ်၍ ယောဂ၏ကုန်ရာ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရခြင်းငှါ မထိုက်တန်၊ ရဟန်းတို့ ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လရှိသူ မကောင်းမှုမှ ထိတ်လန့်တတ်သူ ရဟန်းသည် သစ္စာလေးပါးတရားကို သိခြင်းငှါ ထိုက်တန်၏။ နိဗ္ဗာန်ရခြင်းငှါ ထိုက်တန်၏။
“Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được Chánh giác, không có thể chứng được Niết-bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được Niết-bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.”
Puppy, Chùa Tảo Sách
©Ashin Sopāka 2018
Posted in Dhamma	| Tagged ardor, dhamma, fear of wrongdoing, wisdom
Posted on4Aug 2018 by Ashin Sopāka
“The supreme should be attained by an ascetic,
“The supreme should be attained by the unstained,
“I am victorious in battle!
an adept, I am extinguished.” – AN 8.85
“Yaṁ samaṇena pattabbaṁ,
Yaṁ vedagunā pattabbaṁ,
“Yaṁ nimmalena pattabbaṁ,
Yaṁ ñāṇinā ca pattabbaṁ,
“Sa-môn đạt được gì,
Ta, vô học, tịch tịnh.”
အကြင်ဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းသို့ ငြိမ်းအေးပြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ရောက် အပ်၏၊ (မြတ်သောအကျင့်ကို) ကျင့်သုံးပြီးဖြစ်၍ မကောင်းမှုကို မျှောပြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ရောက်အပ်၏၊ အကြင်ဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းသို့ အသိဉာဏ်သို့ ရောက်ပြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ရောက်အပ်၏၊ သမားတော် ဘိသက္ကမည်သော မြတ်စွာဘုရားသည် အတုမဲ့ဂုဏ်သို့ ရောက်အပ်၏။ အကြင်ဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းသို့ အညစ်အကြေးကင်းသော မြတ်စွာဘုရားသည် ရောက်အပ်၏၊ စင်ကြယ်သူဖြစ်သော အညစ်အကြေးမရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် ရောက်အပ်၏၊ အကြင်ဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းသို့ ဉာဏ်ရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် ရောက်အပ်၏၊ လွတ်မြောက်သော မြတ်စွာဘုရားသည် အတုမဲ့ဂုဏ်သို့ ရောက် အပ်၏။ ထိုဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းသို့ ရောက်ပြီးသော စစ်မြေပြင်ကို အောင်ပြီးသော ထိုငါ သည် အနှောင်အဖွဲ့မှလွတ်၍ (လူအများကိုလည်း) လွတ်စေခဲ့၏၊ (ထိုငါသည်) ကျင့်ပြီးဖြစ်သော (ကိလေသာ) ငြိမ်းအေးပြီးသော အလွန်ယဉ်ကျေးသော ဆင်ပြောင် ကြီးသဖွယ် ဖြစ်ပေ၏။
Dragonflies @Ashin Sopāka 2018
Posted in Dhamma	| Tagged bhikkhu, dhamma, mindfulness, paññā, wisdom